WAR DEG DEG: Toogasho ka dhacday Muqdisho, Meydadka 3-ruux oo yaala… - iftineducation.com
WAR DEG DEG: Toogasho ka dhacday Muqdisho, Meydadka 3-ruux oo yaala…
aadan21 / October 27, 2016
iftineducation.com – Warar goor dhow nasoo gaarey ayaa sheegaya in rag hubyesan oo loo maleynayo iney ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab ay Saddex Askari ku dileen Isgoyska Ex-control Balcad ee magaalada Muqdisho.
Goob jooge ayaa u sheegay Warbaahinta in raggan hubeysan ay si lama filaan ah ku dileen Askartaan, iyaga oo qaatey hubkii ay askarta wateyn.
Sidoo kale Goob joogaha oo ka gaabsadey magaciisa ayaa inoo sheegay in halka dilka askartaan ka dhacay ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka, kuwaasi oo halkaa dadka ka kala eryey islamarkaana billaabey howlgallo.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda dilkan, sidoo kalena weli wax war ah kama aaney soo saarin saraakiisha amniga ee gobolka Banaadir.
Maalmihii ugu dambeeyey waxa Muqdisho ku soo batay Dilalka ku dhufoo ka dhaqaaq ah oo loo geysanayo Saraakiisha iyo Askarta ka tirsan DF.
Al-Shabab oo Weerartay Saldhig Ku Yaalla Muqdisho
Daawo Sawirada:-Waxyaabo Aan Laga Fileyn oo lagu Arkay Dekada Hobyo